China Medium Speed ​​Jelly Glue ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
Jelly glue uhlobo iglu yezilwane, esetshenziswa embonini yokuphrinta nokupakisha ngemuva kokucubungula okujulile. Ngoba ibukeka njenge-jelly, ebizwa nangokuthi i-jelly glue.
Imikhiqizo ekhiqizwa ngokusebenzisa i-jelly glue ayikhubazekile, akulula ukuba isikhunta futhi ikhihlize amagwebu, futhi ingakhulisa ukuqina kwemikhiqizo yephepha. Ngaphezu kwe-viscosity eqinile, i-jelly glue inokuthamba okulingene, ukuze izingxenye ezisongwayo zezincwadi ezinoqweqwe oluqinile, izichazamazwi akulula ukuziphula.
sakha ijeli glue yebhokisi eliqinile, ijeli glue yekhava eqinile, i-jelly glue yencwadi yomgogodla, i-jelly glue yokubopha incwadi, i-jelly glue yekhalenda ledeski, i-jelly glue ye-albhamu yezithombe.
Ijubane elimaphakathi i-gelatin glue imvamisa isetshenziswa kumishini ezenzakalelayo, njenge:
i-jelly glue yomshini wokunamathisela okuzenzakalelayo
i-jelly glue yomshini wokwenza ikesi okuzenzakalelayo
i-jelly glue yomshini wokufaka ibhokisi eliqinile othomathikhi
i-jelly glue yomshini wokwenza ikhava enzima okuzenzakalelayo
Ngokuya ngezinqubo ezahlukahlukene zokukhiqiza kanye nemishini, i-jelly glue icaciswa ngokulandelayo:
1. I-jelly glue yemishini enesivinini esiphansi semi-othomathikhi: Okomshini wezandla noma ozenzakalelayo. Ijubane lokomisa lolu hlobo lweglue lihamba kancane, futhi iglue lizohlala linamathele ngaphakathi kwemizuzwana eyi-120 ngemuva kokunamathiselwa kwephepha elingaphezulu. Lokhu kuvumela isikhathi esanele sokuqeda umsebenzi ngesandla. Ulungele umshini wokunamathisela othomathikhi, othomathikhi wokunamathisela othomathikhi, umshini wokwenza ikesi okuzenzakalelayo, umshini wokunamathisela njll.
I-2.Jelly glue yomshini wokwenza ikesi ngejubane eliphakathi: Isetshenziselwa ukukhiqizwa kwamabhokisi wesipho ahlukahlukene, isivinini sokuphulukisa siyashesha, isikhathi sokomisa cishe amasekhondi angama-60. Kuyinto ejwayelekile ejwayelekile yesivinini i-jelly glue, i-glue ingaqinisa ubulukhuni bekhadibhodi, ngobumnene obuqinile, elungele okokushisa imishini semi-othomathikhi yekesi, umshini wokumboza ibhokisi oqinile.
I-3.Jelly glue yomshini wekhava yesivinini esisheshayo: Ifanele incwadi enoqwembe oluqinile. Inezici zokupholisa okusheshayo, ukuqina okuphezulu, ukusonga okuqinile, isivinini esiphakeme kakhulu ukuhambisana nomshini wama-60-80 ngomzuzu. Ifanele umshini wekhava yencwadi yesivinini esizenzekelayo ephelele ngokugcwele.
4. I-jelly glue yomugqa wokukhiqiza wokuxhumanisa oqinile: I-glue yenzelwe umgogodla wencwadi. Inezici zejubane eliphezulu kanye ne-viscosity ephezulu.
Langaphambilini Ijubane Elisheshayo Jelly Glue
Olandelayo: I-Slow Speed ​​Manual Jelly Glue